အတန်းဖော်မှသင့်ဖုန်းမှဓါတ်ပုံကိုထည့်သွင်းဖို့ကိုဘယ်လို - ဖုန်းကို - 2019
Excel ကိုအတွက် built-in function တွေကိုတစ်ခုဖြစ်တယ် သွယ်ဝိုက်။ ယင်း၏တာဝန်စာသားကို format နဲ့ရည်ညွှန်းအငြင်းအခုံအဖြစ်မြို့သားများကတည်ရှိပြီးသောစာရွက်အဖွဲ့ဝင်ဆဲလ်ရဲ့ contents, ပြန်လာရန်ဖြစ်ပါသည်။
ဒါဟာရှိကအကြောင်းအထူးအချည်းနှီးဖြစ်၏, ဒါကြောင့်ဘယ်လိုအခြားတဆဲလ်ရဲ့ contents ဖော်ပြရန်တစ်ဦးပိုမိုလွယ်ကူစွာလမ်းနိုင်ပုံပေါ်လိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်ထွက်လှည့်အဖြစ်သို့သော်, ဤအော်ပရေတာကို အသုံးပြု. ကြောင့်ထူးခြားတဲ့စေသောတစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံအချို့နှင့်ဆက်စပ်။ အချို့ကိစ္စများတွင်, ဒီပုံသေနည်းကအခြားနည်းလမ်းများကိုပဲကိုင်တွယ်ကြဘူးသို့မဟုတ်ထိုသို့ပြုမှအများကြီးပိုခက်ပါလိမ့်မည်သည့်ထိုကဲ့သို့သောပြဿနာများ, ဖြေရှင်းပေးနိုင်သည်။ ပိုပြီးအသေးစိတ်အတွက်ဘာအော်ပရေတာထွက်ရှာကြပါစို့ သွယ်ဝိုက် ဘယ်လိုအလေ့အကျင့်အတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
အော်ပရေတာများ၏အလွန်နာမကိုအမှီ သွယ်ဝိုက် အတိုကောက် "Dual-Link ကို"။ တကယ်တော့ဒါဟာလည်းယင်း၏ရည်ရွယ်ချက်ညွှန်ပြ - တယောက်ကိုတယောက်ဆဲလ်များမှသတ်မှတ်ထားသော link ကိုမှတဆင့် output ကိုဒေတာ။ နှင့်အညီ, အခြားလုပ်ငန်းဆောင်တာအများစုနဲ့မတူဘဲ, ကိုးကားအတူလုပ်ကိုင်ပါကသည်, ထိုကိုးကားနှစ်ဖက်စလုံးကနေကွဲကွာ, plain text format နဲ့သတ်မှတ်ထားသောရမည်ဖြစ်သည်။
ဒါကကြေညာချက်လုပ်ဆောင်ချက်များကို၏အမျိုးအစားကိုရည်ညွှန်းသည် "ကိုးကားခြင်းနှင့်စစ်ခင်းကျင်း" အောက်ပါ syntax ရှိပါတယ်:
= သွယ်ဝိုက် (ssylka_na_yacheyku; [A1])
ဆငျခွေစကား "တစ်ဦးကလာပ်စည်းရန်ရည်ညွှန်း" စာရွက်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးမှကိုးကား, ဖော်ပြရန်ရသောပါရှိသောဒေတာအဖြစ်ကိုယ်စားပြုသည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, link ကိုစာသားအမြင်ရှိရမည်, ထိုကိုးကား "ပတ်ရစ်" ခံရဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဆငျခွေစကား "A1" ဒါဟာမဖြစ်မနေမရဖြစ်ပြီးအများဆုံးကိစ္စများတွင်ပါကသတ်မှတ်ရန်မလိုအပ်ပါဘူး။ ဒါဟာနှစ်ခုအဓိပ္ပါယ်များရှိနိုင်ပါသည် "TRUE" နှင့် "အတုအယောငျ"။ ပထမဦးဆုံးအမှု၌, အော်ပရေတာစတိုင်အတွက်လင့်များဆုံးဖြတ်သည် "A1"အမည်ရကြောင်းစတိုင် default အနေဖြင့် Excel ကိုများတွင်ပါဝင်သည်။ အဆိုပါအငြင်းအခုံတန်ဖိုးကိုမှာအားလုံးမသတ်မှတ်ထားပါသည်ဆိုပါကတိကျစွာအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မည် "TRUE"။ ဒုတိယဖြစ်ရပ်မှာရည်ညွှန်းစတိုင်အတွက်ဖြစ်ရကြလိမ့်မည် "R1C1"။ ဒါကစတိုင်လင့်များအထူးသ Excel ကို setting များကိုထည့်သွင်းရန်လိုအပ်ပါတယ်။
အဆိုပါ, ရိုးရှင်းစွာထားပါ သွယ်ဝိုက် ဒါဟာ "တန်းတူညီမျှ" နောက်မှအခြားဖို့ရည်ညွှန်းတဦးတည်းကလာပ်စည်းနှင့်ညီမျှ၏တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, အများဆုံးကိစ္စများတွင်, ဟူသောအသုံးအနှုနျး
= သွယ်ဝိုက် ( "A1")
သို့သော်ဟူသောအသုံးအနှုနျးမှမတူဘဲ "= A1" အော်ပရေတာ သွယ်ဝိုက် တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ဆဲလ်များနှင့်စာရွက်ဒြပ်စင်ပေါ်တွင်သြဒီနိတ်မှချည်ထားသောဘူး။
ဒီအရိုးရှင်းဆုံးဥပမာထဲမှာဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာစဉ်းစားပါ။ အဆိုပါဆဲလ် B8 နှင့် B9 အသီးသီးမှတျတမျးတငျထားတဆင့်ထားရှိ "=" formulas နှင့် Functions များ သွယ်ဝိုက်။ နှစ်ဦးစလုံးပုံသေနည်းများ၏ဒြပ်စင်ရည်ညွှန်း B4 နှင့် contents တွေကိုများ၏စာရင်း output ကိုက။ ၏သင်တန်းကအတူတူပဲအကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်။
စားပွဲပေါ်မှာရန်နောက်ထပ်အချည်းနှီးသောဒြပ်စင်ပေါင်းထည့်ခြင်း။ သင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်သကဲ့သို့, လိုင်းများသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ပုံသေနည်းများတွင် အသုံးပြု. "ညီမျှ" ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးဆဲလ်ကိုရည်ညွှန်းကတည်းကတန်ဖိုးကိုင်း၏သြဒီနိတ်ပြောင်းလဲပြီလျှင်ပင်, တူညီတဲ့ဖြစ်နေဆဲပေမယ့်ဒေတာများကိုအော်ပရေတာများက output ကိုဖြစ်ပါတယ် သွယ်ဝိုက် ပြောင်းလဲသွားတယ်။ ဒါကမစာရွက်ဒြပ်စင်ငှါ၎င်း, သြဒိနိတ်အပေါ်ရည်ညွှန်းသည်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကြောင့်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါဖြည့်စွက်ပြီးနောက်, အတန်းလိပ်စာ B4 ဒါဟာအခြားစာရွက်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးပါဝင်သည်။ ဒါဟာယခုပုံသေနည်းများ၏ content နှင့်စာရင်းဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဤသည်အော်ပရေတာအခြားဆဲလ်မှအထွက်, အရေအတွက်ကိုဒါပေမယ့်လည်းစာသား, ဖော်မြူလာ၏တွက်ချက်မှုရလဒ်နှင့်စာရွက်၏ရှေးခယျြထားတဲ့ item အတွက်စီစဉ်ပေးသည့်အခြားမည်သည့်တန်ဖိုးများကိုသာပေးနိုင်သည်။ သို့သော်အလေ့အကျင့်အတွက်ဒီ feature ခဲတစ်ဦးတည်းကိုအသုံးပြုသည်, ဒါပေမယ့်ပိုပြီးမကြာခဏရှုပ်ထွေးဖော်မြူလာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု။
ဒါဟာအော်ပရေတာကတခြားစာရွက်များမှလင့်များနှင့်အခြား Excel ကိုစာအုပ်ပုံနှိပ်ပင်ရဲ့ contents များအတွက်သက်ဆိုင်ပေမယ့်ဤကိစ္စတွင်အတွက်သူတို့ကို run သင့်ကြောင်းသတိပြုသင့်ပါတယ်။
ဥပမာအား 1: အော်ပရေတာများ၏တစ်ခုတည်းသောလျှောက်လွှာ
, ကိုစတင်ရာအတွက် function ကိုရိုးရှင်းတဲ့ဥပမာစဉ်းစားရန် သွယ်ဝိုက် သငျသညျသူမ၏အလုပ်၏အနှစ်သာရကိုနားလည်နိုင်အောင်ဒါဟာလွတ်လပ်စွာဆောင်ရွက်သည်။
ကျနော်တို့အနေနဲ့မတရားစားပွဲပေါ်မှာရှိသည်။ task ကိုသီးခြားကော်လံလေ့လာမှုပုံသေနည်းအားဖွငျ့ပထမဦးဆုံးဒြပ်စင်မှပထမဦးဆုံးကော်လံ၏ပထမဦးဆုံးဆဲလ်များ၏ဒေတာကိုဖော်ပြရန်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
ကျနော်တို့ကဖော်မြူလာထည့်သွင်းရန်စီစဉ်ထားသောပထမဦးဆုံးအလွတ်ကော်လံဒြပ်စင်, ကိုရွေးပါ။ အိုင်ကွန်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ "Insert ရာထူးအမည်".
ပြတင်းပေါက်လွှတ်တင် function ကို wizard ကို။ ကျနော်တို့၏အမျိုးအစားသို့ပြောင်းရွှေ့နေကြသည် "ကိုးကားခြင်းနှင့်စစ်ခင်းကျင်း"။ စာရင်းထဲကတန်ဖိုးကို select "သွယ်ဝိုက်"။ ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "အိုကေ".
အော်ပရေတာသတ်မှတ်ထားသောအငြင်းပွားမှုများ၏ပြတင်းပေါက်လွှတ်တင်။ လယ်ပြင်၌ "တစ်ဦးကလာပ်စည်းရန်ရည်ညွှန်း" သငျသညျ, အသင်ထောက်ကူငါတို့သည်ပြသပေးသောရဲ့ contents ဆဲလ်များ၏လိပ်စာသတ်မှတ်ရပေမည်။ ဟုတ်ပါတယ်, ကိုယ်တိုင်ဝင်ပေမယ့်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျတဲ့လွယ်ကူအောက်ပါလုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်နိုင်ပါသည်။ လယ်ပြင်၌ရှိသော cursor Set, အဲဒီနောက်စာရင်းတွင်သက်ဆိုင်ရာကို item ပေါ်တွင်လက်ဝဲဘက် mouse ကိုခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ သင်ကလိပ်စာလယ်ပြင်၌ခင်းကျင်းပြသကြောင်းပြီးနောက်ကြည့်ရှုနိုင်သကဲ့သို့။ ထို့နောက်နှစ်ဖက်စလုံးပေါ်တွင် link ကိုကိုးကားမီးမောင်းထိုးပြ။ ကျွန်တော်မှတ်မိအမျှဒီ feature ကဒီဖော်မြူလာ၏အငြင်းအခုံနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
လယ်ပြင်၌ "A1"ကျနော်တို့ကိုသြဒီနိတ်၏ပုံမှန်အမျိုးအစားထဲမှာအလုပ်လုပ်ကတည်းကဒါဟာတန်ဖိုးထားရန်ဖြစ်နိုင် "TRUE"တဖန်သင်တို့မှာအားလုံးကျနော်တို့ပြုအချည်းနှီးသောကြောင့်စွန့်ခွာနိုင်ပါတယ်။ ဤသည်နှင့်ညီမျှအရေးယူဖြစ်လိမ့်မည်။
ယခုကြှနျုပျတို့မြင်သည်အတိုင်းစားပွဲ၏ပထမကော်လံ၏ပထမဦးဆုံးဆဲလ်ရဲ့ contents ယင်းပုံသေနည်းဖြစ်ပါတယ်ကျသော, စာရွက်အဖွဲ့ဝင်ထဲမှာဖော်ပြပါတယ် သွယ်ဝိုက်.
ကျနော်တို့ကိုအောက်တွင်တည်ရှိသည်သောဆဲလ်၌ဤ function ကိုအသုံးပြုချင်ပါကဤအမှု၌ကဖော်မြူလာသို့မိတ်ဆက်ခံရဖို့ရှိသည်မယ်လို့စီဒြပ်စင်သီးခြားစီ။ ကျနော်တို့ကဝစွာလက်ကိုင်သုံးပြီးက copy, ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ရင်ကူးယူဖို့ကြိုးစားလျှင်, အမည်တူကော်လံ၌ရှိသမျှသောဒြပ်စင်များပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ အမှန်မှာထိုကွောငျ့ရည်ညွှန်း (ကိုးကားပတ်ရစ်) စာသားပုံစံတစ်ခုအငြင်းအခုံအဖြစ်လုပ်ရပ်များနှင့်တစ်ဦးဆွေမျိုးမဖွစျနိုငျ, ငါတို့မှတ်မိအဖြစ်, သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
ဥပမာ 2: ရှုပ်ထွေးပြီးဖော်မြူလာအတွက်အော်ပရေတာများ၏အသုံးပြုမှု
ကျနော်တို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဝင်ငွေတစ်ဦးသည်လစဉ်စားပွဲပေါ်မှာရှိသည်။ မေလနှင့်ဇွန်လ - - နိုဝင်ဘာလကျနော်တို့ထိုကဲ့သို့သောမတ်လအဖြစ်, အချိန်တစ်အချို့သောကာလအတွက်ဝင်ငွေပမာဏကိုတွက်ချက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီအတှကျအကြှနျုပျတို့သရိုးရှင်းသော summation ကိုသုံးနိုင်သည်, သို့သော်ဤအမှု၌, လိုအပ်ပါကစီကာလအတွက်စုစုပေါင်းရလာဒ်များတွက်ချက်၏သင်တန်း, ငါတို့သည်အစဉ်မပြတ်ပုံသေနည်းကိုပြောင်းလဲရန်ရှိသည်။ ဒါပေမယ့်သင်အသုံးပြုတဲ့အခါ သွယ်ဝိုက် ဒါကြောင့်သင့်လျော်တဲ့လကို အသုံးပြု. ဖွင့်တစ်ဦးချင်းစီဆဲလ်ထဲမှာတဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာနေတဲ့အကွာအဝေးကိုပြုပြင်မွမ်းမံဖို့ဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ ရဲ့မတ်လကနေမေလမှကာလအဘို့အပေါင်းလဒ်တွက်ချက်ဖို့အစပိုင်းတွင်အလေ့အကျင့်၌ဤ option ကိုအသုံးပြုရန်ကြိုးစားကြပါစို့။ အဆိုပါအော်ပရေတာများ၏ပေါင်းစပ်အတူဖော်မြူလာကိုအသုံးပြုလိမ့်မည် ငှေပေါငျး နှင့် သွယ်ဝိုက်.
ပထမဦးစွာအပေါင်းတို့၏, စာရွက်ပေါ်တစ်ဦးချင်းစီဒြပ်စင်အစအဦးများနှင့်တွက်ချက်မှုအသီးသီးထွက်သယ်ဆောင်ပါလိမ့်မည်သည့်အဘို့ကာလအဆုံး၏လအမည်များကိုလုပ်နေပါတယ်, "မတ်လ" နှင့် "မေလ".
အခုတော့ကော်လံအားလုံးကိုဆဲလ်မှနာမည်တစ်ခုပေး "ဝင်ငွေခွန်"ဘယ်ကသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာလအတွင်း၏အမည်နှင့်ဆင်တူဖြစ်လိမ့်မည်။ အကြောင်း, ကော်လံအတွက်ပထမဦးဆုံးဒြပ်စင်ဖြစ်ပါသည် "ဝင်ငွေခွန်"ဝင်ငွေ၏အရွယ်အစားဖော်ပြခဲ့တဲ့စေခြင်းငှါပါရှိသည်ဘယ်ဟာ "ဇန်နဝါရီလ", ဒုတိယ - "ဖေဖော်ဝါရီလ" စသည်တို့ကို
ဒါကြောင့်, ပစ္စည်း၏ပထမကော်လံအမည်ကကို select နှင့်လက်ျာ mouse ကိုခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါရန်။ တစ်ဦးက Context Menu က။ ဒါဟာအတွက် item ကို Select လုပ် "နာမည်တစ်ခုသတ်မှတ် ... ".
နာမည်တစ်ခုဖန်တီးပြေးပြတင်းပေါက်။ လယ်ပြင်၌ "အမည်" နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. inscribe "ဇန်နဝါရီလ"။ အဘယ်သူမျှမကပိုအပြောင်းအလဲများကိုသင်လယ်ပြင်၌ရှိသောသြဒီနိတ်စစျဆေးနိုငျရုံကိစ္စတွင်သျောပြတင်းပေါက်စေရန်လိုအပ်သည် "Range" ဆဲလ်များ၏ဇန်နဝါရီလများအတွက်ဝင်ငွေ၏အရွယ်အစား်လိပ်စာကိုက်ညီမှုမရှိပါ။ ထိုနောက်မှခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "အိုကေ".
ကျွန်တော်ပြတင်းပေါက်နာမ၌၎င်းဒြပ်စင်၏ခွဲဝေယခုကြည့်ရှုနိုင်သကဲ့သို့၎င်း၏လိပ်စာနှင့်ကျွန်တော်သူမကိုအပ်ပေးတော်မူ၏နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. မပြပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့စစ်ကြောင်းအပေါငျးတို့သညျအခွားသောဒြပ်စင်များနှင့်အလားတူစစ်ဆင်ရေးလုပ်ဆောင် "ဝင်ငွေခွန်"သူတို့ကိုစီးရီးများ၏အမည်များပေးခြင်းအားဖြင့် "ဖေဖော်ဝါရီလ", "မတ်လ", "ဧပြီ" စသည်တို့ကို အားလုံးပါဝင်နိုင်ဒီဇင်ဘာလ။
သငျသညျသတ်မှတ်ထားသောကြားကာလ၏ပေါင်းလဒ်ကိုပြသပါလိမ့်မည်ရှိရာဆဲလ်ကို Select လုပ်ပါ, ထိုသို့ရွေးပါ။ ထိုအခါ icon ကို click "Insert ရာထူးအမည်"။ ဒါဟာပုံသေနည်းဘား၏လက်ဝဲ, နှင့်ဆဲလ်၏အမည်ကိုဖော်ပြပေးလယ်တို့၌ရသော၏ညာဘက်မှတည်ရှိသည်။
အဆိုပါ activated window ထဲမှာ function ကို wizard ကို ကျနော်တို့၏အမျိုးအစားသို့ပြောင်းရွှေ့ "သင်္ချာ"။ သူတို့ကအမည်ရွေး "sum"။ ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "အိုကေ".
ဤ action ၏အကောင်အထည်ဖော်မှုအောက်ပါပြတင်းပေါက်အော်ပရေတာအငြင်းပွားမှုများစတင်သည် ငှေပေါငျးဤအတန်ဖိုးများပေါင်းလဒ်ဖြစ်သော၏တစ်ခုတည်းသောရည်ရွယ်ချက်။ ဒီ function ကို၏ syntax အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်:
= sum (number1; number2; ... )
ယေဘုယျအားအငြင်းပွားမှုများ၏နံပါတ်တန်ဖိုးများကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ် 255။ သို့သော်ဤအရာအလုံးစုံအငြင်းပွားမှုများတစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကနံပါတ်သို့မဟုတ်ဒီနံပါတ်ကိုပါရှိသောထားတဲ့အတွက်ဆဲလ်များ၏သြဒီနိတ်ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကအစကတည်ရှိရာစာရွက်အဖွဲ့ဝင်ရန်လိုအပ်သောအရေအတွက်ကိုသို့မဟုတ်လိပ်စာမှတ်တွက်ချက်ထားတဲ့ embedded ပုံသေနည်းအဖြစ်ပြုမူလိမ့်မည်။ ဒီစွမ်းရည်အတွက် In-built ဖြစ်ပါတယ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အော်ပရေတာကအသုံးပြုလိမ့်မည် သွယ်ဝိုက် ဤကိစ္စတွင်ပါ။
လယ်ပြင်၌ရှိသော cursor Set "နံပါတ် 1"။ ထိုအခါလယ်၌နာမတျောကိုပ္ပံ၏ညာဘက်တစ်ခု inverted တြိဂံ၏ပုံသဏ္ဌာန်ထဲမှာ icon ကို click လုပ်ပါ။ မကြာသေးမီကအသုံးပြုသောလုပ်ငန်းဆောင်တာများစာရင်းကိုဖော်ပြသည်။ သူတို့တွင်ရှိ name ကိုပါလျှင် "သွယ်ဝိုက်"ထိုအခါချက်ချင်းဒီ function ကိုငြင်းခုံ၏ပြတင်းပေါက်ထဲကသွားကြဖို့ပေါ်မှာကလစ်လုပ်ပါ။ သို့သော်ထိုသို့ကောင်းစွာဒီ list ထဲမှာသင်ရှာမည်မဟုတ်ကြောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သငျသညျနာမတျောကို click နှိပ်ဖို့လိုအပ် "အခြား features တွေ ... " စာရင်း၏အောက်ဆုံးမှာ။
အဆိုပါအကျွမ်းတဝင်ပြတင်းပေါက်ဒါဟာပြေး function ကို wizard ကို။ အဆိုပါအပိုင်း Moving "ကိုးကားခြင်းနှင့်စစ်ခင်းကျင်း" အဘယ်မှာရှိသနည်းအော်ပရေတာ၏နာမတျောကို select သွယ်ဝိုက်။ ဒီစစ်ဆင်ရေးပြီးနောက် button ကို click "အိုကေ" ပြတင်းပေါက်၏အောက်ခြေတွင်။
အော်ပရေတာအငြင်းပွားမှုများဝင်းဒိုးကိုလွှတ်တင် သွယ်ဝိုက်။ လယ်ပြင်၌ "တစ်ဦးကလာပ်စည်းရန်ရည်ညွှန်း" ပမာဏကိုတွက်ချက်ရန်သတ်မှတ်ထားသောကနဦးအကွာအဝေး၏လ၏အမည်ကိုပါရှိသည်ထားတဲ့စာရွက်ဒြပ်စင်၏လိပ်စာဖော်ပြသည်။ , ဤကိစ္စတွင်၌ရှိသကဲ့သို့, လိပ်စာဆဲလ်နှင့်၎င်း၏ contents တွေကိုများ၏သြဒီနိတ်အစေခံမည်မဟုတ်, လိုအပ်သောမဟုတ်ကိုးကားအတွက် link ကိုယူပါကဤအမှု၌တိကျစွာကြောင်းသတိပြုပါပြီးသားစာသားပုံစံ (စကားလုံးသည့် ကျေးဇူးပြု. "မတ်လ") ။ လယ်ယာ "A1" ကျနော်တို့ဇာစ်မြစ်၏စံအမျိုးအစားသတ်မှတ်ရေးအသုံးပြုနေသည်ကတည်းကဗလာထားခဲ့ပါ။
လိပ်စာခလုတ်ကိုနှိပ်ဖို့လယ်ပြင်တွင်, မရလျင်ထဲမှာဖော်ပြပါတယ်ပြီးနောက် "အိုကေ"ဒီအသိုက် function ကို, နှင့်သမားရိုးကျ algorithm ကိုထံမှသူမ၏ကွဲပြားခြားနားသောနဲ့အတူလှုပ်ရှားမှုများအဖြစ်။ နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ "sum" ယင်းပုံသေနည်း bar မှာ။
ထိုနောက်မှငါတို့သည်အအငြင်းပွားမှုများင်းဒိုးကိုပြန်သွား ငှေပေါငျး။ သငျသညျထိုလယ်၌တွေ့နိုင်ပါသည်အဖြစ် "နံပါတ် 1" ရှိပြီးသားအော်ပရေတာကိုပြသ သွယ်ဝိုက် ယင်း၏အကြောင်းအရာနှင့်အတူ။ ချက်ချင်း entry ကိုအတွက်နောက်ဆုံးဇာတ်ကောင်ပြီးနောက်တူညီတဲ့လယ်ပြင်၌ရှိသော cursor သတ်မှတ်မည်။ တစ်ဦးကအူမကြီး (:) ။ ဤသည်မှာသင်္ကေတဆဲလ်အကွာအဝေးလိပ်စာများဖြစ်သောနိမိတ်လက္ခဏာကိုဖော်ပြသည်။ ထို့နောက်လယ်ပြင်ကနေ cursor ကိုဖယ်ရှားခြင်းမရှိဘဲ, နောက်တဖန်လုပ်ဆောင်ချက်များကို select လုပ်ပါရန်တြိဂံ၏ပုံသဏ္ဌာန်ထဲမှာ icon ကို click လုပ်ပါ။ ဤအချိန်, မကြာသေးမီကအသုံးပြုသောအော်ပရေတာနာမတျော၏စာရင်း "သွယ်ဝိုက်" ကြှနျုပျတို့သညျဤအင်္ဂါရပ်လတ်တလောသုံးစွဲနေတဲ့အဖြစ်ဒါကြောင့်ကျိန်းသေ, ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်သင့်သည်။ အမည်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။
နောက်တဖန်ပြတင်းပေါက်အော်ပရေတာအငြင်းပွားမှုများဖွင့်လှစ် သွယ်ဝိုက်။ လယ်သို့ထား "တစ်ဦးကလာပ်စည်းရန်ရည်ညွှန်း" ငွေတောင်းခံကာလပြီးဆုံးသည့်လအမည်များရှိပါတယ်ရှိရာစာရွက်, အပေါ်ဒြပ်စင်လိပ်စာ။ ကိုသြဒီနိတ်ကိုးကားခြင်းမရှိဘဲထဲသို့ဝင်ခံရဖို့ရှိသည်နှင့်တပြိုင်နက်။ လယ်ယာ "A1" နောက်တဖန်အလွတ်ကျန်ရစ်စေ၏။ ထိုနောက်မှခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "အိုကေ".
ယင်းပုံသေနည်းသူ့ဟာသူရတာဟာသော Pre-ရွေးချယ်ထားသည့်စာရွက်ဒြပ်စင်အတွက် - ထိုဒေတာများကိုအရေးယူအစီအစဉ်ကာလ (မေမတ်လ) အတွက်လုပ်ငန်းဝင်ငွေထို့အပြင်၏ရလဒ်တွက်ချက်ခြင်းနှင့် Output ဖြစ်ပါတယ်ပြီးနောက်အမျှတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
ကျနော်တို့ကဆဲလ်သို့ပြောင်းလဲသွားပါလျှင်အဘယ်မှာရှိအခြားအပေါ်အစအဦးများနှင့်တွက်ချက်မှုကာလ၏အဆုံး၏လရေးထိုးအမည်များ, ဥပမာအားပေါ် "ဇွန်လ" နှင့် "နိုဝင်ဘာ"က The ရလဒ်အညီပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်။ ဝင်ငွေပမာဏကိုသတ်မှတ်ထားသောအချိန်ကာလအတွင်း၏ရေးစပ်လိမ့်မည်။
သင်ခန်းစာ: Excel ကိုအတွက်ပမာဏကိုတွက်ချက်ဖို့ကိုဘယ်လို
သငျသညျသော function ကိုအချက်ကိုရှိနေသော်လည်းကြည့်ရှုနိုင်သကဲ့သို့ သွယ်ဝိုက် အသုံးပြုသူများသည်တို့တွင်လူကြိုက်အများဆုံးတယောက်ကိုခေါ်မရနိုငျသညျ, သို့သျောလညျး, က Excel ကိုအတွက်ရှုပ်ထွေးကွဲပြားတခြား tools များ၏အကူအညီဖြင့်ပြုသောအမှုပါပြီနိုင်ထက်အများကြီးလွယ်ကူသည်၏ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်မှကူညီပေးသည်။ အားလုံးအများစုဟာ, အော်ပရေတာသူဟူသောအသုံးအနှုနျးမြား၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည့်အတွက်ရှုပ်ထွေးဖော်မြူလာအတွက်အသုံးဝင်သည်။ သို့တိုင်ကအားလုံးကိုအော်ပရေတာရဲ့အခွင့်အလမ်းများသည်ဟုမှတ်ချက်ချရပါမည် သွယ်ဝိုက် နားလည်ရန်အတော်လေးခဲယဉ်း။ ဤသည်အသုံးပြုသူများအဘို့ဤအသုံးဝင်သော function ကို၏အနိမ့်လူကြိုက်များကရှင်းပြသည်အတိအကျအရာဖြစ်တယ်။
ဗီဒီယို Watch: Como Instalar Android Studio - Aprendiendo Android 02 - @JoseCodFacilito (စက်တင်ဘာလ 2019).